valihan'i Jehovah - Le blog de midera
Publié le 9 novembre 2007 par midera
Antonkom-pihiran'ny fiangonana malagasy ao Soisa sy ny manodidina.Nandritra ny fotoana nipetrahanay tao Genève dia nitaiza be anay sy nanabe anay tamin'ny lafin'ny rehetra ny antonkom-pihira.Na tamin'ny ara-panahy izany, na ara-nofo, na ara-sosialy....betsaka ny fianarana noraisina tao.Ny tena nampiavaka ny fiaraha-monina tao dia ny fifankatiavan'ny samy ankizy.Tsy nisy efitra nampisaraka fa dia tena iray daholo ny rehetra.Betsaka ny feo re avy aty ivelany mitsiriritra sy mahatsapa izany fifankatiavana lehibe izany ,hany ka na izay ihany aza dia efa tori-teny velona hoan'ny mpitazana.
Tsy misy mialangalana amin'ny adidy sy andraikitra rehetra miandry satria samy mahatsiaro tena ho tompony avokoa, hany ka vita tsara daholo izay atao rehetra. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra!
Ankehitriny, nohon'ny antony maro samihafa dia voatery nandao an'ny Genève izahay, anisan'ny zavatra iray lehibe tena mahamanina anay dia ny antonkom-pihira.Nefa ny tena mahafaly sy isaorana an'Andriamanitra dia hita mihintsy ny tanan'Andriamanitra mampiroborobo sy manitatra hatrany ny fanjakany amin'ny alalan'izy ireo.
Tena jiro fanazavana sy fanasin'ny tany tokoa.Ho an'ny mambra tsirairay dia tena hery sy aina vaovao hatrany ny fankanesana mamonjy fivoriana rehefa vizaky ny zavatra niseho rehetra nandritra ny herin'andro.
Amin'izao fotoana izao rehefa mahita antoko maro samihafa aty alavitra aty dia lasa tonga ny fampitahana hoe, na dia mbola hisy 10 taona aza tsy ho tonga mihintsy toy ny firahalahiana misy ao amin'ny VJ ny ntoko maro.
Fony mbola tao dia mety nahita izany ho toy ny mandeha ho azy, fa rehefa nandao ka mahita ny hafa vao tena mahatsapa ny fahalebiazany sy ny voninahitr'Andriamanitra misy ao.
Tsy hiala ao am-ponay mandrakizay hianareo ry Valiha, misaotra betsaka tamin'ny fifaliana sy fitahiana rehetra nentinareo teo amin'ny fiainanay.
Anao ny dera sy ny laza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay!
« Amin'ny andro rehetra... Voulez vous faire une... »